Talyaaniga oo soomaaliya Ugu Deeqay Malaayiin Doolar.
Friday November 08, 2019 - 16:51:51 in News by Silfer Silver
Dowladaha Soomaaliya iyo Talyaaniga ayaa kala saxiixday heshiis lagu fulinayo mashaariic kala duwan taasoo ku baxayso lacag gaareysa 3 Milyan oo Euro.
Wasiirka Wasaaradda Caafimadka Soomaaliya Drs; Fowsiiya Abiikar Nuur oo u saxixiday dowlada Soomaaliya heshiiskan ayaa sheegtay in dhaqaalahan iyo mashaariicda kaleba ay dowladda Talyaanigu ugu tala gashay in wax loogu qabto Caafimaadka Dadka Soomaaliyeed.
"Waan sii wadi doonaa taageerada dhinaca Caafimaadka ee Dadka Soomaaliyeed waxaana uga mahad celinayaa Wasaaradda sida ay noola shaqeyneyso” ayuu yiri; Amb. Alberto Vecchi.
"Soomaaliya iyo Talyaaniga xiriir qoto dheer ayaa ka dhaxeeya waana ku mahadsan yihiin taageerada dhinac walba ah, qalabkan wax badan ayuu ku kor dhin doonaa shaqada Isbitaalka iyo Dadka adeegga u baahan”ayay tiri Wasiir Fowziya.
Dowladda Soomaaliya ayaa la wareegtay maamulka iyo gacan ku haynta Ibitaalka Martiini ee magaalada Muqdisho biloowgii Febraayo ee Sanadkaan, waxaana haatan adeegyo Caafimaad oo bilaasha ah uu u qabtaa dad ka badan 40,000.